शिक्षक साक्षात्कारका लागि प्रश्नहरू र सुझाव गरिएका जवाफहरू
शिक्षकहरूको लागि शिक्षकहरूको लागि संसाधन
शिक्षक साक्षात्कार प्रश्नहरू र सुझाव गरिएका जवाफहरू
by मेलिस्की केली
शिक्षक साक्षात्कारका लागि मुख्य प्रश्नहरू र लक्षित जवाफहरू
शिक्षकहरू साक्षात्कारहरू दुवै नयाँ तथा दिग्गज शिक्षकहरू समान रूपमा रैछन तान्न सक्छन्। तपाईंलाई शिक्षण साक्षात्कारको लागि तयारी गर्न एक तरिका यहाँ प्रस्तुत गरिएको प्रश्नहरू जस्तै पढ्न र कुन साक्षात्कारकर्ताहरूले प्रतिक्रियामा खोज्न सक्छन् विचार गर्नुहोस्।
निस्सन्देह, तपाईले स्तर स्तरको विशिष्ट प्रश्नहरू वा अंग्रेजी भाषा कला, गणित, कला वा विज्ञान जस्ता सामग्रीहरूको जवाफ दिन तयार हुनुपर्छ। त्यहाँ पनि एक "चाल" प्रश्न हुन सक्छ जस्तै, "के तपाईं आफैले भाग्यमानी विचार गर्नुहुन्छ?" वा "यदि तपाईंले तीन जनालाई रात्रिमा निमन्त्रणा गर्न सक्नुहुन्छ, तपाई कसले रोज्नुहुन्छ?" वा यहाँ "यदि तपाईं रूख हुनुहुन्थ्यो, कस्तो किसिमको रूख तिमी हुनुहुनेछ?"
निम्न प्रश्नहरू अधिक परम्परागत छन्, र तपाइँलाई सामान्य शिक्षा साक्षात्कारको लागि तयार गर्न मद्दत गर्न प्रयोग हुनुपर्छ। चाहे एकल प्रशासकसँग प्रश्नहरू एक-एक साक्षात्कारमा हो वा साक्षात्कारकर्ताहरूको प्यानल द्वारा प्रस्तुत गरिएको हो, तपाईंको प्रतिक्रियाहरू स्पष्ट र संक्षिप्त हुनुपर्छ। शिक्षण कुनै पनि स्तरको स्तरमा ठूलो जिम्मेवारीहरूसँग आउँछ, र तपाईंले तयार पार्नु भएको प्यानललाई यी जिम्मेवारीहरू लिनको लागि सक्षम हुनुपर्दछ। तपाईंले शिक्षकको रूपमा आफ्नो साक्षात्कारकर्ता वा प्यानलमा जानकारी पेश गर्न आफ्नो क्षमताको प्रदर्शन गर्नु पर्छ ताकि उनीहरूले उनीहरूको शिक्षण टोलीको भागको रूपमा कल्पना गर्न सक्दछ।
यदि तपाईं आफ्नो शिक्षण साक्षात्कारको लागि तयारी गर्न मद्दत गर्न थप जानकारी चाहनुहुन्छ भने, एक सफल शिक्षक नौकरी साक्षात्कार माथि शीर्ष दस कुञ्जी जाँच गर्नुहोस्। तपाईं शिक्षकलाई साक्षात्कारका लागि शीर्ष 12 साक्षात्कार गल्तीको साथ सावधान रहनु आवश्यक छ पनि हेर्न चाहनुहुन्छ। अधिक स्रोतहरू
तिम्रो शिक्षा के हो?
यो साक्षात्कार प्रश्न धेरै अधिक व्यवसायहरु लाई सोधिएको छ र तपाईंलाई पुनः सुचना वा सिफारिशको पत्रमा उपलब्ध उपलब्ध अतिरिक्त जानकारी प्रस्तुत गर्ने सबै भन्दा राम्रो अवसर प्रदान गर्दछ।
तपाईंको शिक्षाको तालिमको बारेमा यस प्रश्नको जवाफ दिने कुञ्जी तपाईंको शक्तिको स्पष्ट उदाहरण प्रदान गर्नका लागि तिनीहरू प्रत्यक्ष रूपमा कार्यसँग सम्बन्धित छन्। उदाहरणको लागि, तपाईं धैर्यता वा तपाईंको विश्वास छ कि प्रत्येक विद्यार्थी सफल वा आफ्नो मातृभाषा मा आफ्नो कौशल सक्षम हुन सक्छ, वा प्रविधि संग तपाईंको पहिचान हुन सक्छ।
तपाईंको बलहरू तुरुन्तै ध्यानयोग्य नहुन सक्छ, त्यसैले साक्षात्कारकर्ता वा प्यानललाई दृश्यात्मक रूपमा मद्दत गर्न उदाहरण प्रदान गर्न महत्त्वपूर्ण छ। बढि »
तपाईंको लागि कमजोरी के हो?
कमजोरीको बारेमा प्रश्नको जवाफ दिँदै, कमजोरीसँग साक्षात्कारकर्तालाई तपाईंले पहिले नै स्वीकृत गर्नुभएको छ र नयाँ शक्ति विकास गर्न प्रयोग गर्नुपर्दछ।
मैले पत्ता लगाए कि म रणनीतिहरु को पढने मा राम्रो तरिकाले हासिल नहीं गरेको थियो, त्यसैले मैले केहि पाठ्यक्रम को काम गर्न को लागि काम ले लिया हूँ।
मलाई लाग्यो कि मलाई ढिलो गर्न र धेरै समय बिताउन विशेष गरी परियोजनाको निर्देशन दिइयो ताकि विद्यार्थीहरू अधिक स्वतन्त्र हुनेछन्।
मलाई सहयोगको लागि सोध्न डराउनु भएको थियो जबसम्म मलाई मेरो टीममा शिक्षकहरूबाट सबैभन्दा राम्रो सल्लाह आयो।
सामान्यतया, तपाईं कमजोरी प्रश्न छलफल गर्न धेरै समय खर्च गर्नदेखि सावधान रहनु पर्छ।
तपाईं पाठका लागि नयाँ विचारहरू कसरी भेट्नुहुन्छ?
साक्षात्कारकर्ता वा प्यानल तपाईंलाई खोज्नु भएको ज्ञान देखाउन र तपाईंले इच्छुक पहुँच र सामग्री जानकारी, पाठ विकास, र पाठ संवर्धनको लागि धेरै फरक स्रोतहरू प्रयोग गर्न देखाउनुहुनेछ।
तपाईंको नयाँ विचारहरू कहाँ पुग्न सकिन्छ व्याख्या गर्ने एक तरिका वर्तमान शैक्षिक प्रकाशनहरू र / वा ब्लगहरू सन्दर्भ गर्न सकिन्छ। तपाइँलाई नयाँ विचारहरू कहाँ पाउन सकिन्छ भन्ने बुझ्न अर्को तरिका हो कि तपाईंले आफ्नो विशेष अनुशासनमा फिट गर्नको लागि प्रयोग गर्ने शिक्षक मोडेल देख्नुभयो वा परिमार्जन गर्न सक्नुहुन्छ। कुनैपनि तरिकाले वर्तमान शिक्षा प्रवृतिको शीर्षमा रहन वा सँगी शिक्षकहरूलाई सिक्नको लागि तपाईंको चाहना गर्ने क्षमताको वर्णन गर्दछ।
एक साक्षात्कारको क्रममा, यो महत्त्वपूर्ण छ कि तपाईं पाठ्यपुस्तिकामा उल्लिखित पाठहरू पछ्याउनुहुने छैन किनभने यो तपाईंको भागमा कुनै पनि रचनात्मकता देखाउने छैन।
पाठ सिकाउन कुन तरिकाहरू प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ?
यहाँ कुञ्जी भनेको तपाईंको कक्षाकोठामा विभिन्न प्रकारका शिक्षाका लागि फरक फरक पार्ने क्षमता छ। यसको अर्थ तपाईले विभिन्न तरिकाका निर्देशकीय प्रविधिहरू को बारेमा जानकारीको साथ संक्षेपमा यी ती प्रविधिहरू प्रयोग गर्ने इच्छा र प्रत्येक उपयुक्त हुन्छ जब तपाईलाई न्याय गर्ने क्षमता चाहिन्छ।
देखाउने एक तरीका यो छ कि तपाइँ निर्देशनको उत्कृष्ट अभ्यासहरू बारे जान्नुहुन्छ प्रस्ताव प्रस्ताव कुन सामग्री कुन विषय वा सामग्री क्षेत्रमा अधिकतम लागू हुनेछ (EX: सिधा निर्देशन, सहकारी शिक्षा, छलफल, बहस, छलफल वा अनुकरण) साथै प्रभावकारी अनुशासन रणनीतिहरु मा हाल को अनुसन्धान को संदर्भ मा।
तथ्यहरू उल्लेख गर्न निश्चित गर्नुहोस् कि तपाईंले विद्यार्थीहरू, उनीहरूको क्षमताहरू, र उनीहरूको चासो लिनु आवश्यक छ जुन तपाईले तपाईको पाठ योजना डिजाइनमा प्रयोग गर्ने कुन तरिकाले अनुदेशी रणनीतिहरू खातामा राख्नुहुन्छ।
विद्यार्थीहरूले सिकेको कुरा कसरी निर्धारण गर्नुहुन्छ?
एक साक्षात्कारकर्ता वा प्यानलले तपाइँलाई आफ्नो पाठका उद्देश्यहरू विचार गर्ने महत्त्वलाई बुझ्न चाहन्छ र तपाइँ प्रत्येक पाठको अन्त्यमा वा एकाईको अन्त्यमा विद्यार्थीहरूको मूल्याङ्कन गर्नेछ भनेर हेर्न चाहन्छ। कुञ्जी भनेको हो कि तपाईंले पहिचान गर्न सक्ने एक पाठ वा इकाई प्लान मापन योग्य परिणामहरूमा निर्भर गर्दछ, न केवल 'गट विवेक'।
तपाईले सन्दर्भ गर्नुपर्नेछ कि तपाई विद्यार्थी प्रतिक्रियालाई कसरी इकट्ठा गर्नुहुन्छ (EX: प्रश्नोत्तरी, बाहिर निस्कनुहोस्, वा सर्वेक्षण) र तपाइँ कसरी भविष्यका पाठमा निर्देशन चलाउन कसरी प्रतिक्रिया प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ।
तपाईं आफ्नो कक्षा कोठामा कसरी नियन्त्रण राख्नुहुन्छ?
स्कूल वेबसाइट भ्रमण गरी पत्ता लगाउने कुन नियमहरू पहिले नै स्थानमा छन्। तपाईंको प्रतिक्रियामा यी नियमहरू विचार गर्न निश्चित हुनुहोस्। तपाईंको जवाफले विशेष नियमहरू, प्रणालीहरू, र नीतिहरू समावेश गर्नुपर्छ जुन तपाईंले कक्षाको प्रबन्ध गर्न दिनको लागि सेट अप गर्नुहुनेछ।
तपाईले विशेष उदाहरणहरू सन्दर्भ गर्न चाहानुहुन्छ (EX: कक्षामा सेल फोन प्रयोग; बारम्बार खराबी; अत्यधिक बोल्ने) तपाईंको आफ्नै अनुभवबाट। यद्यपि यदि तपाईंको अनुभव हुँदा विद्यार्थीले शिक्षा पाउँथ्यो भने, कक्षाको व्यवस्थापनमा तपाईंको पहिचानले तपाईंको जवाफको प्रमाण थप्दछ।
कसैलाई कसरी राम्रो भन्न सकिन्छ?
यस प्रश्नको लागि, निम्नलाई एउटा उदाहरण दिनुहोस् जुन कसैले तपाईंको क्लासरूममा हिंड्न सक्ने कुन कुरालाई देख्न सक्छ जुन तपाइँ राम्ररी व्यवस्थित छन् भनेर वर्णन गर्नेछ:
कसरी डेस्कहरू व्यवस्थित हुनेछन्?
तपाईंले विद्यार्थीलाई प्रदर्शनमा कति पटक राख्नुभयो;
विद्यार्थीहरू कहाँ छन् सामग्रीहरू कसरी जान्छन्;
तपाईं कसरी दिईएका स्रोतहरू (पाठहरू, आपूर्तिहरू) कसरी खाता गर्नुहुन्छ?
तपाईं विद्यार्थी प्रदर्शनमा टाइमलाइन र सही रेकर्ड कसरी बनाए राख्नुहुन्छ भनेर उल्लेख गर्न निश्चित हुनुहोस्। यी रेकर्डहरूले कसरी विद्यार्थी विकासको दस्तावेज गर्न मद्दत गर्न सक्छ भनेर व्याख्या गर्नुहोस्।
हालैका पुस्तकहरू तपाईले पढ्नुभएको छ?
केहि किताबहरू छान्नुहोस् जुन तपाइँ छलफल गर्न सक्नुहुन्छ र कम से कम एक आफ्नो शिक्षण क्यामेरा वा सामान्यतया शिक्षामा जडान गर्न प्रयास गर्नुहोस्। तपाईं एक विशेष लेखक वा शोधकर्ता सन्दर्भ गर्न चाहानुहुन्छ।
कुनै पनि राजनीतिक चार्ज गरिएका पुस्तकहरूबाट टाँस्न निश्चित गर्नुहोस्, तपाईंको साक्षात्कारकर्ताले तपाईसँग असहमत भएमा।
तपाईंले पुस्तकहरूको शीर्षक प्रदान गरे पछि तपाइँले पढ्नु भएको कुनै ब्लग वा शैक्षिक प्रकाशन पनि सन्दर्भ गर्न सक्नुहुन्छ।
तपाईं पांच वर्षमा आफैलाई कहाँ देख्नुहुन्छ?
यदि तपाइँ यस स्थानको लागि रोज्नुभएको छ भने, तपाइँ प्राय: आवश्यक प्रशिक्षण प्रदान गर्नुहुनेछ जुन तपाईंलाई विद्यालयको नीतिहरू र कुनै पनि प्रविधि प्रोग्राम स्कूल प्रयोगका साथ परिचित हुनुपर्दछ। तपाइँ शिक्षण गर्दै स्कूल वर्षको दौरान प्रस्तावित अतिरिक्त व्यावसायिक विकास हुन सक्छ। यसको मतलब विद्यालयले शिक्षकको रूपमा तपाईंमा लगानी गर्नेछ।
साक्षात्कारकर्ता वा प्यानलले हेर्न चाहन्छ कि पाँच वर्षमा तपाईंका लगानीहरू तिर्नेछन्। तपाईंले पुष्टि गर्नु पर्छ कि तपाइँसँग लक्ष्यहरू छन्, र तपाईं शिक्षण व्यवसायमा प्रतिबद्ध हुनुहुन्छ।
यदि तपाइँ अझै पनि पाठ्यक्रमहरू लिइरहेका छन् भने, तपाइँ पनि थप उन्नत कोर्सको लागि हुन सक्ने जानकारी वा योजनाहरू पनि प्रदान गर्न सक्नुहुन्छ। बढि »
तपाइँ कसरी प्रयोग गर्नुहुन्थ्यो, वा तपाइँ कसरी प्रयोग गर्नुहुन्छ, कक्षाको प्रविधिमा प्रविधि?
यस प्रश्नको जवाफमा, ध्यान दिनुहोस् कि प्रविधिको प्रयोगले छात्र शिक्षालाई समर्थन गर्नु पर्छ। तपाईं ब्ल्याकबोर्ड वा पावरटेकर जस्तै प्रयोग गर्नुभएको स्कूल डेटा कार्यक्रमहरूको उदाहरणहरू प्रदान गर्न चाहानुहुन्छ। तपाईले व्याख्या गर्न चाहानुहुन्छ कि तपाई कसरी सफाउ प्रयोग गर्नुभयो जस्तै कि Kahoot वा पढ्ने AZ निर्देशन निर्देशन समर्थन गर्न। तपाईं आफ्नो पहिचान को अन्य शिक्षा सफ्टवेयर जस्तै Google Classroom वा Edmodo संग व्याख्या गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईं क्लास डोजो वा रिमाइन्ड प्रयोग गरी परिवार र अन्य शेयरधारकहरूसँग कसरी जडान गर्नुभएको छ।
यदि तपाइँ आफ्नो क्लासरूममा प्रविधि प्रयोग गर्नुहुन्न भने, तपाइँको प्रतिक्रिया इमानदार र प्रत्यक्ष हुनुपर्दछ। तपाईंले व्याख्या गर्न सक्नुहुन्छ किन तपाईंले कक्षामा प्रविधि प्रयोग गर्नुभएन। उदाहरणका लागि, तपाईं व्याख्या गर्न सक्नुहुन्छ कि तपाईंसँग अवसर छैन, तर तपाईं सिक्न इच्छुक हुनुहुन्छ।
तपाईं कसरी एक अनिच्छा विद्यार्थी संलग्न गर्नुहुन्छ?
यो प्रश्न सामान्यतया मध्य र उच्च विद्यालय ग्रेड पदका लागि आरक्षित गरिएको छ। यस प्रश्नको ठूलो जवाफ छनौट छ । तपाईं व्याख्या गर्न चाहानुहुन्छ कि तपाईं विद्यार्थीहरूलाई के पढ्न वा के लिनु पर्ने केही छनौट कसरी गर्न सक्नुहुन्छ, तर अझै पनि पाठ्यक्रमको उद्देश्यहरू पूरा गर्नुहोस्। उदाहरणको लागी, तपाईं व्याख्या गर्न सक्नुहुन्छ कि कति कार्य असाइन विषयमा फरक पाठ प्रयोग गरेर विद्यार्थी छनौटको लागि अनुमति दिन्छ, सम्भवतः केहि पढ्ने फरक स्तरको साथ। तपाईं पनि कि पेशकश विद्यार्थीहरु रिपोर्ट को लागि एक विषय छान्न वा तिनीहरूलाई अन्तिम उत्पादन को लागि एक माध्यम को चयन गर्न को लागि अनुमति दिन को लागि अनुमति दिन को व्याख्या गर्न सक्छन् व्याख्या गर्न सक्छन् अनिच्छुक सिकन को प्रोत्साहन को मदद गर्न सक्छन्।
विद्यार्थीहरू उत्प्रेरित गर्ने अर्को तरिका प्रतिक्रिया मार्फत छ। एक-एक सम्मेलनमा एक अनिच्छा विद्यार्थीसँग भेट्न तपाईंलाई पहिलो स्थानमा उत्प्रेरित किन जानकारीको बारेमा जानकारी दिन सक्छ। रुचि देखाउँदै कुनै विद्यार्थी स्तरमा एक छात्र संलग्न गर्न मद्दत गर्न सक्छ।
के तपाईंसँग कुनै प्रश्न छ?
तपाइँसँग विद्यालयको लागि निर्दिष्ट एक वा दुई तयार प्रश्नहरू हुनुपर्छ। यी प्रश्नहरू वेबसाइटमा सजिलै उपलब्ध जानकारीको बारेमा जानकारी हुँदैन (EX: क्यालेन्डर वर्ष, एक विशेष ग्रेड स्तरमा विद्यार्थीहरू वा शिक्षकहरू)।
विद्यालयमा तपाईंको सम्बन्ध विकास गर्नका लागि तपाइँको रुचि देखाउने प्रश्न सोध्न यो अवसर प्रयोग गर्न कोसिस गर्नुहोस् (अतिरिक्त-पाठ्यवर्ती गतिविधिहरू उपलब्ध) वा एक विशेष कार्यक्रमको बारेमा।
ज्यादै धेरै प्रश्नहरू वा व्यक्तिहरूलाई सोध्न नदिनुहोस् जसले नकारात्मक प्रभाव दिनेछ (EX: संख्याको दिन बन्द)।
सिमिलहरू सिकाउन लोकप्रिय गीतहरूको प्रयोग गर्नुहोस्
क्लासरूममा ब्लूमको वर्गीकरण
सिफारिस पत्रहरू लेख्ने गाइड
ELL विद्यार्थीहरूको ज्ञानको ज्ञान
अप्रिल लेखन प्रोम्प्ट
ब्रह्मांड एपिसोड9वर्कशिट हेर्दै
एसएलओ लक्ष्यहरू सेट गर्न विश्वव्यापी र निदान स्किन प्रयोग गर्दै
ब्रह्मांड: स्पेसटाइम ओडिसी शिक्षण उपकरण
ब्रह्मांड एपिसोड 13 वर्कशिट हेर्दै
प्रविधि निबंध शैली सुझाव गरिएको सुझाव संग
ब्रह्मांड एपिसोड7हेरेको कार्यपत्र
जेनेट इवानोविच - सबैभन्दा हालको विज्ञप्ति
प्रथम विश्व युद्धको प्रमुख गठबन्धन
पशु Totems: Reptiles को रूप मा Totems
कसरी कन्जुगेट "लाभर" (फस गर्न) फ्रान्सेलीमा
10 मोलसहरूको बारेमा तथ्य
कोनी स्मिथ जीवनी
आप्रवासीहरू र सार्वजनिक फाइदाहरू
पर्यावरण विज्ञान के हो?
R & B Singers को वास्तविक नाम
कसले राजनैतिक अभियान कोष गर्दछ?
क्रसबोक कसरी गर्ने र अनलक गर्नुहोस् रङ कंगन एड प्रयोग गरेर
शिक्षकहरूको लागि प्रेरणात्मक उद्धरण
Orishas: Orunla, Osain, Oshun, Oya, and Yemaya
बिन्दु नोटहरू र पट्टिहरू
5 उत्तम ज्याज क्रिसमस एल्बमहरू
प्रसिद्ध आर्किटेक्ट्स द्वारा वास्तुकला चित्रहरु
रेड कलेज प्रवेश आवश्यकताहरु
अकादमी के हो?
त्यहाँ आगमन आगमन ग्याँस क्लाउड सीधा आउटटा अन्तरिक्ष अन्तरिक्ष हो
पग्लन परम्परामा एक ओस्टारा अल्टर सेट अप गर्नुहोस्